महन्थ ठाकुर शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्री बन्दै ! – हाम्रो देश
महन्थ ठाकुर शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्री बन्दै !
काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार ढल्ने जोखिम टरेको छ । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले दह्रो साथ दिने निष्कर्षमा पुगेपछि सरकार ढल्ने जोखिम टरेको हो ।नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपा संगको निरन्तर वार्ता र सम्बादले गर्दा जसपा ओलीको भरोसा गर्न थालेको छ । जसपाका मुद्धाहरु सरकारले पुरा गर्न थाले पछि जसपा ओली प्रति विश्वास बढाएको छ । यही कारण जनता समाजवादी पार्टी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढेको छ । ओली आफुले सकेसम्म जसपाका कार्यकर्तालाई रिहा गर्न पक्षमा छन् जुन उनका लागि सरकार जोगाउने एकमात्र विकल्प हो ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई मनाउन सके सरकारमा जाने निश्चित हुनेछ । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा छन् । जसपा सरकारमा गएमा ८ देखि १० वटा मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । उपसभामुख पनि जसपाले नै पाउने गरी सहमति बन्न सक्छ । जसपा सरकारमा सहभागी भएमा उपेन्द्र यादव या राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा जाने सम्भावना छ । तर, यादव ओलीलाई साथ दिने पक्षमा छैनन् ।
जसपाबाट महन्थ र महतोलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालयको प्रस्ताव पुगिसकेको छ । मन्त्री बन्ने सम्भावितमा राजेन्द्र श्रेष्ठ, महेन्द्र राय, शरदसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादव, चन्दा चौधरी, मोहम्मद इस्तियाक राइ, उमाशंकर अगरिया, प्रदीप यादव, रेणु यादवलगायत छन् । रेणु यादवलाई उपसभामुख बनाउने सहमति पनि बनाउन खोजिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जसपालाई सरकारमा ल्याउन प्याकेजमै सम्झौता गर्ने गृहकार्य बढाएका छन् । उनले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग पटक पटक भेटवार्ता गरिसकेका छन् ।